ငါ့ကိုအနီးဖြစ်စေစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအတွက်သင့် Next ကို Weekend ဖြစ်ရပ်များ Wysluxury ပုဂ္ဂလိကဂျက် Air ကိုပဋိညာဉ်စာတမ်းပျံသန်းမှုဝန်ဆောင်မှု. မည်သည့်ဦးတည်ရာမှာပုဂ္ဂိုလ်ရေးနင်္ဂနွေခရီးသွား, မှာကိုးကားရ https://wysluxury.com/quote/
Jan 27 - ဖေဖော်ဝါရီ 13 Grammy Awards
ဖေဖော်ဝါရီ 04 New York Fashion Week
ဖေဖော်ဝါရီ 08 - ဖေဖော်ဝါရီ 14 Winter Olympics
ဖေဖော်ဝါရီ 09 - ဖေဖော်ဝါရီ 25 The Westminster Kennel Club Dog Show
ဖေဖော်ဝါရီ 12 - ဖေဖော်ဝါရီ 13
ဖေဖော်ဝါရီ 13 Berlin Film Festival
ဖေဖော်ဝါရီ 15 - ဖေဖော်ဝါရီ 25 Yachts Miami Beach
ဖေဖော်ဝါရီ 15 - ဖေဖော်ဝါရီ 19 Daytona 500
ဖေဖော်ဝါရီ 18 Rio de Janeiro Carnival
ဖေဖော်ဝါရီ 24 - ဖေဖော်ဝါရီ 28
ဖေဖော်ဝါရီ 27 - မတ်လ 03 Academy Awards (Oscars)
မတ်လ 04 International Geneva Motor Show
မတ်လ 08 - မတ်လ 18 SXSW
မတ်လ 09 - မတ်လ 18 စိန့်. Petersburg Grand Prix
မတ်လ 09 - မတ်လ 11
စိန့်. Patrick's Day
မတ်လ 17 Palm Beach International Boat Show
မတ်လ 22 - မတ်လ 25 F1 Australian Grand Prix
မတ်လ 22 - မတ်လ 25 Ultra Music Festival Miami
မတ်လ 23 - မတ်လ 25 MLB World Series
မတ်လ 29 - ဇူလိုင်လ 17
မတ်လ 31 - Apr 02 Dubai World Cup
မတ်လ 31 The Masters Augusta National Golf Club F1 Chinese Grand Prix
Apr 27 - မေ 06 Kentucky Derby
မေ 09 - မေ 20 F1 Spanish Grand Prix
မေ 11 - မေ 13 F1 Monaco Grand Prix
မေ 24 - မေ 27 Champions League Final
မေ 26 French Open
မေ 27 - ဇွန် 10
မေ 27 EBACE
မေ 29 - မေ 31 Cheltenham Festival
ဇွန် 05 - ဇွန် 10 ဖီဖာကမ္ဘာ့ဖလား CMA Country Music Festival
ဇွန် 07 - ဇွန် 10
ဇွန် 08 - ဇွန် 10 Tony Awards
ဇွန် 10 US Open
ဇွန် 11 - ဇွန် 17 Art Basel Switzerland
ဇွန် 14 - ဇွန် 17 Le Mans 24 Hour Race
ဇွန် 16 - ဇွန် 17
ဇွန် 16 - ဇွန် 27 Royal Ascot
ဇွန် 19 - ဇွန် 23 Wimbledon
ဇူလိုင်လ 02 - ဇူလိုင်လ 15 Pamplona Bull Run
ဇူလိုင်လ 05 - ဇူလိုင်လ 15 F1 British Grand Prix
ဇူလိုင်လ 06 - ဇူလိုင်လ 08
ဇူလိုင်လ 07 - ဇူလိုင်လ 29 Goodwood Festival of Speed
ဇူလိုင်လ 12 - ဇူလိုင်လ 15 British Open Championship
ဇူလိုင်လ 15 - ဇူလိုင်လ 22 Farnborough Air Show
ဇူလိုင်လ 16 - ဇူလိုင်လ 22 MLB All Star Game
ဇူလိုင်လ 27 - ဇူလိုင်လ 29 Bridgestone Invitational
F1 Singapore Grand Prix Sep 14 - Sep 18 Ryder Cup Sep 25 - Sep 30 F1 Russian Grand Prix Sep 28 - Sep 30 F1 Japanese Grand Prix Oct 05 - အောက်တိုဘာ 07 Albuquerque International Balloon Fiesta Oct 06 - အောက်တိုဘာ 14
F1 US Grand Prix Oct 19 - အောက်တိုဘာ 21 F1 Mexican Grand Prix Oct 26 - အောက်တိုဘာ 28